Iyo yakanaka eReader yaunogona kutenga, kusarudza zvakanaka? | MaReaders ese
Iwe unoda here yakanakisa eReader? Nhasi pamusika pane akawanda emabhuku emagetsi atinogona kutenga, asi zvinosuwisa kutenga eBook hakuzi nyore basa uye kuti chero munhu anogona kuzviita nekubudirira. Naizvozvo nhasi kuburikidza nechinyorwa chino ticha kukuyambira nekukupa rairo yekutenga yakanakisa eBook uye usafe uchiedza.
Kana iwe uri kufunga nezve tenga akanyanya kuverenga, tora chinyoreso nebepa kana piritsi rako, kuti utarise zvese zvatiri kuzokuratidza pazasi uye izvo zvinokubatsira iwe kusvika padanho rakakura kusarudza rakanakisa bhuku remagetsi rakashandisirwa pane zvaunoda. Kana iwe uchida kusvika kune iyo poindi, tarisa patafura iyi:
Kindle Oasis, ikozvino ne ... Ona kupiwa Hapana zvigadzirwa zvakawanikwa. Hapana zvigadzirwa zvakawanikwa. Ona kupiwa
Kobo Aura N236-KU-BK-K-EP ... Ona kupiwa
ZVAKAITIKA	 Hupenyu hwakanaka kwazvo hwebhatiri neakakosha kesi yakagadzirirwa neAmazon. Iyo inonyanya kuvandudza modhi yeMhando.	 Uyu ndiwo Mhando iri mune kwete. 1 yekutengesa kwehukama hwayo yemhando uye inogamuchirwa uye yakagadziridzwa mutengo.	 Iyo inotsigira ePub nekumisikidza, chinodikanwa kwazvo chevadzidzi vemahara emabhuku epamhepo. Uye inopesana nemvura.
ZVAKANAKA	 Chiedza chakareruka chine mabhatani ekuvhura mapeji, yekubata skrini, inoshamisa hupenyu hwebhatiri. Iyo inouya neiyo WIFI sarudzo, kana WIFI + 3G ine yakasanganiswa mwenje.	 Iyo ine zvese zvaunoda kuti uve wakanaka ebook muverengi mumusika wanhasi: mwenje, Wi-Fi, kubata skrini, kuzvitonga kwakanaka uye kurema kurema.	 Iyo ine zvimwe kana zvishoma izvo izvo iyo Kindle inogona kuve nayo. Asi izvo zvinotsigirwa zvakananga nePub zvakakosha kune vaverengi vazhinji.
ZVAKAIPA	 Kune zvese izvo zvine imwe, zvinogona kucherechedzwa kuti skrini yayo idiki. Uye yechipiri kuderera ndiyo mutengo wayo wepamusoro.	 Vamwe vaverengi vechinyakare havasati vashandiswa pamapepa emagetsi uye vanogunun'una kuti harisi bepa. Ndizvozvo.	 Bhatiri harigare sekureba sekutsanangura kwako. Uye mutengo wacho unodhura uchienzaniswa neyeMhando yePepa.
KUPUPA	 Kana iwe uchida kuve neakavimbika ebook muverengi pasina kufunga zvakawandisa pamusoro pemutengo, saka iyo Kindle Oasis ndiyo yakanyanya kunaka sarudzo.	 Pakati pevane zviuru mazana matatu nemazana matatu zvevatengi, ine zviyero zvepakati pe6.300 / 4,5, saka izvi zvinotaura zvese kuti inzvimbo yakanaka.	 Muverengi akanaka ebook kuve imwe nzira kune iyo Mhando nekuti havazi vedu tese vanoifarira zvakafanana.
1 Iwo akanakisa maReaders
1.5 Simba eReader Pro
2 Nzira yekusarudza yakanakisa eReader?
2.1 EReader kuratidza
2.3 WiFi kana 3G kubatana
2.4 Dhizaini uye ergonomics
2.5 Yakabatanidzwa duramazwi
Kana tangoziva zvimwe zvezvinhu zvikuru zvatinofanira kufunga nezvazvo patinotenga eBook, tichapindura mubvunzo wekutanga weiyo yakanaka eReader. Kuti tiite izvi, tichaongorora zvimwe zve maReaders akanakisa iyo yatinogona kuwana mumusika;
Kune vazhinji the Hapana zvigadzirwa zvakawanikwa. Iri ibhuku remagetsi rakaringana nekuti rinobatanidza muchinhu chimwe chete chinodiwa kuti unakirwe nekuverenga uye rinogona kutengwa nemutengo usingadhuri kune chero mushandisi.
Mune maonero edu ekuzvininipisa isu takatarisana nechinhu chinenge chakakwana, sezvo sekuziva kwedu tese, maAmazon eReaders anoshandisa yavo yavo eBook fomati, iyo muzvinhu zvakawanda inoganhurira zvatinogona kuita uye mune zvimwe zvinonetsa kugara kwedu munyika yekuverenga kwedhijitari.
Tevere isu tichaita ongororo diki yezvakakosha maficha uye kudomwa kweiyo Kindle Paperwhite;
6-inch inoratidzira neTsamba e-bepa tekinoroji uye yakavhenekerwa kuverenga mwenje, 300 dpi, optimized font tekinoroji, uye 16 grey zviyero
Zviyero: 16,9 cm x 11,7 cm x 0,91 cm
Kurema: 206 gramu
Yemukati ndangariro: 4GB
Bookerly font, yakasarudzika kuAmazon uye yakagadzirirwa kuve nyore uye kugadzikana kuverenga
Kuisirwa iyo Kindle Peji Flip kuverenga basa iro rinozobvumira vashandisi kupukuta kuburikidza nemapeji nepeji, kusvetuka kubva pane chimwe chitsauko kuenda kune chimwe kana kutomhanyira kumagumo ebhuku pasina kurasikirwa nekwavaverenga
Pasina kupokana, iyo Kindle Paperwhite ndeye vazhinji iyo yakanakisa eReader pamusika.
Pakupedzisira hatina kukwanisa kukanganwa iyo Kindle, ikozvino nechiedza ..., iyo inotipa izvo zviri zvakafanira uye zvakafanira kuti tikwanise kuverenga mabhuku edhijitari pamutengo wakaderera kwazvo uye kuti chero mushandisi anogona kutora pasina kuyedza kukuru. Hatifanire kutarisira zvakawandisa kubva kuReader iyi, asi kana tiri kutsvaga chimwe chinhu chakakosha chinotibvumidza kuverenga, iyi Kindle inogona kunge iri mhinduro kwayo.
Aya ndiwo makuru maficha uye kudomwa kweiyi yakakosha Kindle;
Yemukati yekuchengetedza: 4 GB
Tenga yakanakisa eBook Haisi basa riri nyore, asi tinovimba kuti nemazano atakakupai mune ino chinyorwa uye mamodheru atakakuratidza, zvichave nyore kwauri. Ndeipi yakanakisa e-bhuku rako? Kana iwe uchida chimwe chinhu chakachipa, isu zvakare tine sarudzo ine yakanakisa zvakachipa e-mabhuku.
El Kindle Oasis, ikozvino ne ... Iyo ingangoita eReader ine dhizaini iri nani yatinogona kuwana mumusika uye zvakare nehunhu uye maratidziro anodarika izvo zveimwe mudziyo. Yakagadzirwa neAmazon, pamwe yayo chete yakashata poindi ndiwo mutengo wayo, zvinova kuti wakanyanya kukwirisa kune yakawanda kana zvishoma yakajairwa bhajeti.
Tevere isu tichaongorora iyo hukuru hukuru hweiyi Kindle Oasis;
Screen: inosanganisira 7-inch skrini ine tsamba e-papper tekinoroji, kubata, ine resolution ye1440 x 1080 uye 300 pixels pa inch.
Zviyero: 16,2 cm x 11,5 cm x 0,76 cm
Imwe yeakakura mareferensi emusika maKobo zvishandiso, izvo zvakagadziriswa pamusoro pemakore uye zviri padanho rakaenzana neAmazon, kunyangwe parizvino isina mukurumbira uye mukurumbira weAmazon. Iyo Kobo Aura H2O nhema Ichi chimwe chezviratidzo zvekuti Kobo ari kuita zvinhu nemazvo.
Uye nderekuti bhuku iri remagetsi rine mamwe maitiro, atinozoongorora pazasi, izvo zvichatibvumidza kunakidzwa nekuverenga kwedhijitari mune inopfuura nzira inonakidza.
Zviyero: 179 x 129 x 9,7 mm
Kurema: 233 gramu
6,8-inch screen ine resolution ye1430 x 1080 pixels, Tsamba tekinoroji uye 265 ppi
1.700 naRa Li-On bhatiri
Inodzivisa kumvura uye guruva nekuda kwayo IP-67 certification
Kobo Aura H2O nhema
Simba eReader Pro
Kana isu tiri kutsvaga iyo eReader iyo inotipa isu inonakidza mamwe maratidziro uye isu tinogona zvakare kuiwana iyo kune yakaderera kana zvishoma mutengo wakadzikiswa, sarudzo huru inogona kunge iri iyo Energy Sistem eReader ..., Yakagadzirwa nekambani yeSpain Energy Sistem.
Na chenjedzo dhizaini, yakavhenekerwa mwenje uye peculiarity iyo ine vhezheni 4.2.2 yeAroid Sechirongwa chekushandisa, chishandiso ichi chingave chakanakira iwe uchangopinda munyika yekuverenga kwedhijitari.
Pazasi isu tinokuratidza iwo makuru maficha uye kutsanangurwa kweiyi Energy eReader Pro;
Zviyero 160 x 122 x 10 mm
Kurema kwe220 gramu
6-inch yemagetsi inki yekubata skrini ine resolution ye758 x 1024 pixels iyo inopa 212 dpi uye 16 grey mazinga. Iyo ine yakasanganiswa uye inogadziriswa mwenje
ARM Cortex A9 1.0Ghz mbiri-musimboti processor
8 GB yemukati yekuchengetera inokwidziridzwa kuburikidza ne microSD kadhi inosvika ku64 GB
2.800 naRa lithiamu bhatiri
Android 4.2.2 Jelly Bean inoshanda sisitimu
Kana iwe uchine kusava nechokwadi, tiri kuzokuratidza akateedzana ehunhu hwaunofanirwa kufunga nezvako kana uchitenga eBook kutanga kunakidzwa nekuverenga kwedhijitari.
Nzira yekusarudza yakanakisa eReader?
Zvingaitwe sei neimwe nzira, iyo skrini ndeimwe yezvakakosha zvebhuku ripi zvaro remagetsi, uye nderekuti kuverenga kubva kwariri tinoshandisa nguva huru zuva rega rega. Kune izvi, zvakakosha kuti iwe uve ne skrini yehukuru hwakakodzera, ine chisarudzo chakaringana uye kuti sezvinobvira yakavakira-mukati mwenjea sezvo ichatibvumidza kuverenga mune yakasununguka nzira uye tisinganete kana kumanikidza maziso edu munenge chero nzvimbo.
Izvo zvakakoshawo kuti titarise nguva yekutenga rimwe kana rimwe bhuku remagetsi nerudzi rweingi yemagetsi iyo yainoshandisa. E-inki Pearl tekinoroji ndiyo yakasimukira kwazvo pamusika uye iripo mune mazhinji emidziyo inonyanya kuzivikanwa pamusika, asi hazvimbo fanirwe kuve nechokwadi cheichi chinhu nekuti ichatibvumidza kuverenga zvakanaka uye zvakare kuva nebhatiri hupenyu hwakareba kwenguva refu kupfuura nemamwe marudzi ematekinoroji.
Kobo Forma ongororo
Iyo skrini ndiyo moyo webhuku remagetsi, saka pasina kupokana, ndeimwe yehunhu hwaunofanirwa kufunga nezvayo zvakanyanya pakusarudza yakanakisisa eReader.
Bhatiri rinowanzo kuve chinhu chechipiri mumabhuku emagetsi, nekuti nekuda kweinki yemagetsi kureba kwayo kunoyerwa mumasvondo, asi isu hatifanire kukanganwa nezvayo futi. Pasina kuvimba zvakanyanya pakushambadzira uko vese vagadziri vanoita kuti bhatiri remuchina wako riite angangoita mavhiki masere, Tinofanira kunyatsoongorora mAh yebhatiri uye kutarisa maonero evamwe vashandisi paInternet
Izvo zvakare zvinonakidza kutarisa kuti imhandoi yechaji iyo eReader yainayo kubvira kana iine chimbi yekumhanyisa ichatibvumidza kubhadharisa chishandiso munguva pfupi. Izvi zvinogona kubatsira chaizvo kana tichifamba zvakanyanya nee-bhuku redu.
Pamwe pamwe nechidzitiro, bhatiri ndechimwe chinhu chakakosha pamberi pe sarudza yakanakisa eReader.
WiFi kana 3G kubatana
Kune vazhinji vashandisi ichi chichava chisinga fadze sarudzo, asi kune vashoma chichava chakakosha. Uye ndizvo Kana iyo eReader iine WiFi kana 3G yekubatana, tinogona kuwana nyore nyore maraibhurari edhijitari kana kunyangwe raibhurari yedu yatinayo mugore.
Kana, kune rimwe divi, yedu itsva eReader isina chero mhando yekubatana, mikana yedu kana zvasvika pakuwana kana kuwana mabhuku edhijitari ichadzikiswa zvakanyanya. Zviri pachena kuti kana tikatsvaga iyo eBook yakanakisaiyo yekubatanidza inofanirwa kunge izere.
Dhizaini uye ergonomics
Tinogona kutaura kuti kumashure isu tinofanirwa kufunga nezvezvinhu zvakadai sekugadzira kana ergonomics. Nezve dhizaini tinogona kufunga kuti haina makona akanyatso kutaurwa kana izvo zvisingatibvumidze kuverenga zvakanaka.
Zvingave zvakare zvinokurudzirwa kuyedza mudziyo usati wautora, semuenzaniso pane yakakura nzvimbo, kutarisa kuti yakagarika here muruoko uye kuti haizove isina kugadzikana zvekuti isingatibvumidze kuverenga, tichifarira peji rega rega.
Zvinoenderana nezvatinoverenga, zvinopfuura zvinogoneka kuti tinofanirwa kuve neduramazwi padyo kuti tikwanise kutarisa kumusoro uye tinzwisise mamwe mazwi. Mamwe mabhuku emagetsi atove neduramazwi rakavakirwa mukati, saka kana iwe uri shamwari yemaduramazwi uye uchiashandisa pese paunoverenga, nyatso tarisa kuti iro bhuku remagetsi rauri kuzotenga rine basa iri.
Kana iwe wakasvika pano uye uchine kusava nechokwadi, kubatana uku Iwe une sarudzo yeeReaders pane yaunopa kuitira kuti iwe ugone kusarudza iyo inokodzera zvakanyanya zvaunoda.
Amazon Prime Reading, chitsva chakatsetseka chema ebook?
Yakazara nzira kuchinyorwa: MaReaders ese » Hardware » vaverengi » Best eReader
Iwe hauna kufunga nezve mafomati emabhuku avanogona kuverenga, mune izvi nyaya kindle iri murombo kwazvo.
Kune mamwe marangi anonakidza, senge iyo PocketBook, iyo iwe yawakaita noutsinye.
Chekupedzisira, chirevo chako pachako: Vaverengi veApple vanochinja zvakanyanya, asi, zvirinani kune wepakati mushandisi, zvakanyanya kuomarara kushandisa (uye zvishoma zvakakwana) pane chishandiso chakagadzirirwa chete kuverenga.
Ngatitii ichokwadi kuti kindle haibate mafomati ese, ichokwadi zvakare kuti kushandura bhuku senge Tolstoy's hondo nerunyararo kubva epub kuenda Azw kana mobi zvinotora angangoita makumi maviri nemaviri masekondi ane caliber uye paPC yangu kuti ndine yekare amd 23- core
Iwe unofanirwa kungwarira neMhando nekuti zvinoita sekunge ivo vakaronga kusakwana uye zvakavaomera kuti vasvike makore maviri ehupenyu. Mushure megore rimwe (kana garandi yavanopa yapera), vanowanzo kupa matambudziko mazhinji ekushanda, kudzamara yavharirwa zvachose nekurasa. Tsvaga internet "kindle lock" uye uchaona.
KUTendeuka KUNOGONA KUITWA BACKWARDS? IZVOZVO ZVINOBVA KUAZW KUENDA EPUB? WAITA HAKO.
Alberto Lozano placeholder mufananidzo akadaro
Kumba tichine Kindle-chizvarwa chekutanga, yakatengwa paKisimusi 2007, ichimhanya.
Zvakare Kindle 4 iyo yatakatenga Kisimusi 2011 uye, pakupedzisira, maviri Kindle paperwhite akatenga muna 2012 na2013 zvichiteerana.
Iko kushandiswa kunopihwa nemhuri yese kwakanyanya uye imwe chete yemapepaqwhites yakarova nguva dzinoverengeka dzakagadziriswa nekutevera mirairo pafoni kubva kuAmazon (chiitiko chinoshamisa uye nekukurumidza). Nguva pfupi yapfuura pakange paine sisitimu yekuvandudza uye pakange pasisina matambudziko zvakare.
Kune rimwe divi, mamwe ma ebook (Papyre nemamwe echizvarwa chayo) ayo atanga tichitenga pakupedzisira aenda kunzvimbo yakasvibira nekumira kushanda uye kutsiviwa neMhando.
Pfungwa yekuti "kurongwa kushaya nguva" haifanire kushandiswa zvisirizvo. Kune yakawanda ngano yemumadhorobha kuseri kwechirevo icho.
Kune mashoma mashoma kesi umo kindle inopunzika zvachose, dambudziko rinowanzo gadziriswa nekukurumidza. Muchokwadi, uye nekupihwa kuomarara, mazhinji emagetsi emagetsi anhasi anogona kuve nedambudziko rekuvharira iro rinogona kugadziriswa nekungotangazve nyore.
Pindura kuna Alberto Lozano
Ndeipi iyo yakanaka kuverenga pdf? Ini ndaive pakati pemaziso angu iyo nyowani Kobo Aura imwe asi ini ndaona bvunzo paYouTube uye zvinonyadzisa ...
Kune vashoma kwazvo, kwete. Ini ndaifarawo neMhando 3 uye ndaive nemafungiro akafanana neako, kusvikira vhiki ino yakangoerekana yafa kwandiri, ndichiichengeta uye ndisina kunyatsoshandisa, ndinogona kunge ndichiverenga bhuku pamwedzi uye iko kushandiswa yekudzika kusimba. Kutsvaga dambudziko rangu pamhepo, ini ndawana mazana ezviuru ezviitiko zvakafanana, kusanganisira makambani akati wandei ane hunyanzvi hwekugadzirisa. Ivo havaite senge kwandiri se "zvisingawanzo" kana "zvakasarudzika" zviitiko. Iwe unowana mashoma kupunzika kana kamwe kamwe kufa kwekufa pane chero chimwe chinhu chinozivikanwa chemagetsi chinhu pane paMhando. Tichifunga nezve avalanche yematambudziko akafanana neyangu andakasangana nawo, handina chokwadi nezve mhando yeAmazon Kindle. Parizvino hapana chakagadzirisa dambudziko rangu, saka ndasarudza kutenga bhatiri idzva ndonamata kuti ndiro dambudziko. Kana ndikamanikidzwa kutenga imwe nyowani, haizove chigadzirwa cheMhando, ndakaratidzwa kuti hunhu hwayo hauna chokwadi.
Ini ndinofunga izvozvi zvakaoma kurova mutengo / mhando chiyero icho kindle Paperwhite inopa. Ichokwadi kuti kubva pakutanga haigone kuverenga mafomati ese ... asi vachishandisa Calibri vanogona kushandurwa nyore nyore kuita fomati inoenderana neMhando.
Mhoro zuva rakanaka. Dambudziko rako rakagadziriswa nekutenga bhatiri nyowani?
Iwe hauna kukanganwa chete mafomati, zvakare odhiyo. Hapana chinoshandiswa kuteerera ku audiobook kana mumhanzi uchiverenga uye, kutaura chokwadi, kana ndichizoda kutakura nharembozha kana piritsi rekubatanidza kune internet, mp3 inoridza mimhanzi uye inoverenga mabhuku ... uve neaverengi yakawanda uye ndinobatanidza zvese nepiritsi
Silvia Trachcel akadaro
Ndine matambudziko nechaji yebhatiri reyangu ebook papyre 6.1 uye iyo skrini yakatariswa muindekisi, ndinoda kuziva kwandingaunze bhuku remagetsi kuti riongororwe
Pindura Silvia Trachcel
Unogona kundiudza kuti mabhuku emagetsi anoshandiswa kukubatanidza iwe kune yeruzhinji network yemaraibhurari emunyika uye kurodha pasi zvakananga.
Pindura kuti utsinye
Ndiri kuda kutenga e-reader, zvakachipa sezvinobvira, izvo zvinonditendera kuti ndiverenge pdf (kwete semufananidzo asi semavara) uye epub uye, kana zvichibvira, uve nesarudzo yemabhuku ehurukuro.
Ini hapana chimwe chandinoita kunze kwekuverenga wongororo asi hapana chave kungojekeserwa kwandiri kubva pane zvakataurwa nevanhu. Semuenzaniso, kazhinji iwo Kindle wongororo anoti iwo wakanaka pamutengo wainawo uye kuti vanoverenga pdf uye nezvimwe, asi ipapo vazhinji vashandisi vanoti vanopa matambudziko mazhinji, iwo ma pdf anoverenga iwo chete semifananidzo saka kana iwe uchisiya iyo tarisa kuverenga chimwe chinhu chidiki kana iwe unofanirwa kuenda kurudyi uye kuruboshwe kuti ukwanise mufananidzo kune iyo peji.
Ndakaverengawo kuti ma TAGUS akanaka asi zvinoita sekunge haapindirani nemabhuku eamazon ...
Zvisinei, ini ndakarasika zvikuru uye ndinoda anoverengwa nekuti ndinogara ndakatakura nemabhuku mazhinji: ')
Hapana muverengi ari kuzokupa zvinogutsa mhedzisiro nemaPDF. Sarudzo yakanakisa inogara iri yekushandura PDF kuita ePub kubva paPC.
Ini ndanga ndichitsvaga chimwe chinhu chakafanana uye pakupedzisira ndinofunga ndiri kuenda kunosarudza iyo Mars de Boyue likbook. Mabooxes akakura zvakare, asi mutengo wacho wakanyanya kukwirira.
Ignatius Nachimowicz akadaro
Nei zviri kuti mune imwe neimwe ongororo ye e-vaverengi inoitwa, zvakasiiwa kutsanangura kuti huwandu hukuru hwemabasa ari pamambure ari mu e-pub fomati, isingaenderane ne Kindle?
Nei zvisina kumira pachena kuti nekudaro, uye kuve iwo chaiwo maficha emhando iye chete waanobvuma, mumwe anomanikidzwa kutenga chete mabasa eiyo kindle fomati, ayo anotengeswa neAmazon, uye ayo, echokwadi, asingakwanise kutorwa pasi? mahara internet?
Ini ndoziva kuti shanduko dzese dzinodiwa dzinogona kuitwa paCaliber saiti, asi nei uchizviisa kune izvo zvinonetsa, kana uchigona kuverenga zvakananga mue-pub?
Pindura kuna Ignacio Nachimowicz
Nekuti zvakanyanya iwe unokwanisa neCaliber shandura ebook mune epub fomati kuenda kumobi kana azw3 fomati, ayo ari iwo Anogamuchirwa Kindle.
Nechikonzero ichocho, mukuwongorora kwakawanda havana kana kuzvitaura, nekuti neCaliber iyo Kindle fomati dambudziko iri "rakagadziriswa".
Mabhuku ekuverenga muChirungu
Bhuku Rechishanu raGrey